Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Sports » I-Qatar Airways ilungiselela iFIFA Arab Cup Qatar 2021
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Sports • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Njengoko le iya kuba yindebe yokuqala yeFIFA yeArabhu, iQatar iya kubonisa eyona bhola ibalaseleyo ye-pan-Arab.
Eyokuqala ngqa Indebe yeFIFA yeArabhu iza kuqhutyelwa eQatar ukusuka ngomhla wama-30 kuNovemba ukuya kowe-18 kweyoMnga, kunye neQatar Airways njengeQela eliSekweni leNqwelomoya yetumente.
Ngamazwe ali-16 athatha inxaxheba, abalandeli ngoku banokujonga ngomdla kule tumente. Amazwe afanelekileyo atsalwa ngokwamaqela amane: IQela A: Qatar, Iraq, Oman neBahrain; Iqela B: Tunisia, UAE, Syria kunye neMauritania; IQela C: iMorocco, iSaudi Arabia, iJordan nePalestine kunye neQela D: iAlgeria, iEgypt, iLebanon neSudan.
Qatar Airways UMlawuli oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Ngaphantsi konyaka ngaphambi kokuba kufike iNdebe yeHlabathi yeFIFA ka-Qatar ka-2022, le tumente iya kuba luvavanyo olugqibeleleyo kuthi njenge-Official Airline kunye noMlingane osemthethweni weFIFA ukulungiselela. kwiqonga elikhulu. Njengoko oku kuya kuba ngowokuqala Indebe yeFIFA yeArabhu, I-Qatar iya kubonisa i-pan-Arab football best. Sifuna ukubonelela abalandeli, abadlali, abasebenzi babaqeqeshi kunye namagosa ngendlela engenamthungo kuhambo lwabo kwaye bahlale apha ukuze bakwazi ukonwabela eyona tumente ibalaseleyo. "
Njengeqabane elisemthethweni leFIFA, Qatar Airways uxhase imisitho emikhulu equka ushicilelo luka-2019 nowama-2020 lweNdebe yeHlabathi yeKlabhu yeFIFA, kwaye iza kuxhasa iNdebe yeHlabathi yeFIFA ka-Qatar ka-2022.
I-Qatar Airways ikwaxhasa awona maqela makhulu ebhola ekhatywayo aquka iAl Sadd SC, iBoca Juniors, iFC Bayern München, iKAS Eupen, kunye neParis Saint-Germain.
Umthwali welizwe welizwe laseQatar uyaqhubeka nokwakha inethiwekhi yayo, okwangoku emi kwiindawo ezingaphezu kwe-140. Ngokwandiswa kweefrikhwensi kwii-hubs eziphambili, i-Qatar Airways ibonelela ngoqhagamshelo olungenakuthelekiswa nanto kubakhweli, nto leyo eyenza kube lula kubo ukuba baqhagamshele kwindawo abayikhethileyo.
Novemba 30, 2021 kwi-01: 50